रक्तअल्पताबाट कसरी बच्ने ? – Health Post Nepal
रक्तअल्पताबाट कसरी बच्ने ?
२०७५ भदौ ६ गते ९:४३
रगतले हाम्रो शरीरका विभिन्न भागमा आवश्यक पोषक तत्व र अक्सिजन आदि पु¥याउने काम गर्छ । शरीरभित्र रगतमा सेता र राता रक्तकोष हुन्छन् । राता रक्तकोषमा हेमोग्लोबिन भन्ने लौहतत्व रहेको हुन्छ । यो लौहतत्व भोजनको माध्यमबाट हाम्रो शरीरले प्राप्त गर्ने गर्छ । यसबाहेक लौहतत्वलाई राम्रोसँग शोषण गर्न प्रोटिन र भिटामिन सीको जरुरत पर्छ । साथै, फोलिक एसिड र भिटामिन बीको पनि जरुरत हुन्छ । रक्तअल्पता विभिन्न कारणले हुने गर्छ । जस्तै, खानामा पर्याप्त लौहतत्वको कमी भएमा, पेटमा जुका परिरहेमा, औलो लागेमा रक्तअल्पता हुन सक्छ । तर, मुख्यचाहिँ भोजनमा लौहतत्वको कमीले गर्दा रक्तअल्पता हुने गर्छ । कहिलेकाहीँ वंशानुगत कारण र केही रोग विशेषले गर्दा पनि रक्तअल्पता हुने गर्छ । त्यसको उपचार पद्धति पनि भिन्नै हुन्छ ।
फलामका भाँडाकुँडा आदि वस्तुबाट लौहतत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । लौहतत्वले रक्तअल्पतालाई रोक्ने काम गर्छ । गाउँतिर मासको दाल, साग आदि पकाउँदा फलामको कराही प्रयोग गर्ने चलन छ । त्यसैले केही मात्रामा भए पनि गाउँका मानिसको शरीरले लौहतत्व प्राप्त गर्दछ ।
प्रेसरकुकरको प्रयोग गर्ने चलन सहरमा अत्यधिक छ । प्रेसरकुकरमा मासको दाल पकाउँदा एउटा सफा फलामको सानो डल्लो सँगै राखेर पकाउन सकिन्छ । विभिन्न किसिमका अन्नहरू, जस्तै ः फापर, कोदो, जौ आदिमा पनि फलामतत्व रहेको हुन्छ । तर, कतिपय ठाउँमा यस्ता अन्नलाई कुअन्न भनेर नखाने गरिन्छ । यस्ता धारणालाई निरुत्साहित पार्न स्वास्थ्यकर्मीले पनि स्थानीय रूपमा पाइने यस्ता अनाजहरूलाई बढावा दिनुपर्छ ।
रक्तअल्पताबाट बच्न खानामा प्रोटिनको मात्रा बढाउनुका साथै भिटामिन बी, फोलिक एसिड र लौहतत्व भएका खानेकुराको प्रयोग गर्नुपर्छ । मासु लौहतत्व र प्रोटिन दुवैको राम्रो स्रोत हो । विशेषगरी, कलेजोमा पर्याप्त मात्रामा लौहतत्व पाइन्छ । तर, मासु महँगो हुन्छ र कतिपय ठाउँमा दिनदिनै नपाइन सक्छ । साथै, केही सांस्कृतिक र धार्मिक कारणले गर्दा पनि कतिपय महिला मासु खाँदैनन् । यस्तो अवस्थामा अन्य शाकाहारी खानाबाट पनि प्रशस्त प्रोटिन प्राप्त गर्न सकिन्छ । जस्तै, भटमास, विभिन्न प्रकारका दाल, राजमा, बोडी आदि पर्याप्त प्रोटिन भएका खाद्यपदार्थ हुन् । यी खाद्यपदार्थलाई पकाइसकेपछि खानुअघि कागती मिसाएर खानाले यसमा भएको लौहतत्व शरीरमा राम्रोसँग शोषित हुन्छ ।
बच्चाबच्चीको शरीरमा लौहतत्व कसरी पु¥याउने ?
साना उमेरका शिशुलाई आमाको दूधबाट नै लौहतत्व प्राप्त हुन्छ । तर, यसका लागि आमाले लौहतत्व पर्याप्त भएका खाना खाने गर्नुपर्छ । शिशुले खाने लिटोलाई फलामको भाँडामा पकाउँदा पनि बच्चाको शरीरले लौहतत्व प्राप्त गर्न सक्छ । दूध उत्तम भोजन हो, तर यसमा लौहतत्व हुँदैन । त्यसैले गाई, भैँसी वा डेरीको दूध बच्चालाई दिँदा फलामको भाँडामा तताएर दिनाले त्यसबाट केही लौहतत्व प्राप्त हुन्छ ।